Sadunhu wechidzimai agadzwa | Kwayedza
19 Jun, 2022 - 16:06 2022-06-17T16:29:26+00:00 2022-06-19T16:00:40+00:00 0 Views
Thupeyo Muleya ari kuBEITBRIDGE
MUNYAYA ine nhoroondo, kunzvimbo yeBeitbridge kuMatabeleland South kwakagadzwa Sadunhu Mahopolo avo vanova vechidzimai pachiitiko chakatungamirirwa nemukuru wemadzimambo kudunhu iri, Mambo Tshitaudze.
Muzvare Ketumile Nare (25) vakagadzwa naMambo Tshitaudze, VaDavid Mbedzi, mubhuku raMalibeng kuBeitbridge West mukupera kwesvondo rakadarika.
Muzvare Nare vanonzi ndivo mudzimai wekutanga kudunhu reBeitbridge kutora chinzvimbo chepamusoro pazvigaro zvemasadunhu nemadzimambo.
Sadunhu Mahopolo vatsiva baba vavo, VaLemohang Nare, avo vakashaika mugore ra2019.
Kugadzwa kwaSadunhu Mahopolo kuzadzikiswa kwezvisungo zveHurumende zvekusimbaradza mabasa ebudiriro mumatunhu kuburikidza nemasabhuku, masadunhu nemadzimambo.
Vachitaura pachiitiko ichi, Mambo Tshitaudze vanoti sadunhu mutsva uyu anotungamirira nzvimbo dzinosanganisira Shashe, Limpopo, Jalukanga, Tuli neNumber 16 (Maramani) kuWard 8 uye vane masabhuku anodarika 30 ari pasi pavo.
“Nhasi tiri kupemberera kugadzwa kwasadunhu wechidzimai zvinofambirana nemitemo yemunyika muno,” vanodaro Mambo Tshitaudze.
Vanoti kusarudzwa kwasadunhu ava kunotevera kuwirirana kwevedzinza remhuri yavo yekwaMahopolo.
“Tinokurudzira vanhu vose kuremekedza vatungamiriri vematunhu uye kushanda pamwe chete navo munyaya dzebudiriro,” vanodaro Mambo Tshitaudze.
Mudunhu reBeitbridge mune madzimambo maviri, masabhuku 416 nemasadunhu gumi uyewo pane nzvimbo dzemasadunhu asati agadzwa dzinoti Makhado, Mazibeli, Siyoga neKohomera.
Muhurukuro, Sadunhu Mahopolo – avo vane dhigirii rezvekutongwa kwematunhu (Local Governance) – vanoti vakazvipira kushanda neruzhinji munyaya dzebudiriro mudunhu ravo.
“Ndakazvipira kushanda neruzhinji munyaya dzebudiriro. Tine zvikoro zvitatu zvepuraimari, sekondari imwe chete nekiriniki imwe muWard 8 kureva kuti kunofanirwa kuvakwa zvakawanda tichibatsirana,” vanodaro Sadunhu Mahopolo.
Vanoti vana vose vane mazera ekuenda kuzvikoro vanofanirwa kupinda chikoro, kunyanya vanasikana.
‘Madzimai musambunyikidzwe mumabas...18 Jun, 2022
Mukadzi wekuba vana 2 abatwa18 Jun, 2022
Vaita 4 ‘days’ vachinamatira chitunha
Tsaona dzemumigwagwa dzowanda: ZRP